Fanehoan-kevitry ny Filoha : “Tsy misy olon-kafa afaka maka ny toeran’ny Mpitsara” -
AccueilRaharaham-pirenenaFanehoan-kevitry ny Filoha : “Tsy misy olon-kafa afaka maka ny toeran’ny Mpitsara”
Malalaka ny Mpitsara eo am-panatanterahana ny asany. Tsy misy olon-kafa hafa afaka maka ny toerany mihitsy. Ny mpitsara ihany no mamoaka ny didim-pitsarana fa tsy ny mpivaro-kena na koa mpivaro-damba. “Ambarako ampahibemaso eo anatrehan’ny vahoaka malagasy fa tsy mbola niantso na nampanome baiko mpitsara mihitsy ka hitsabaka amin’ny asany ny Filoham-pirenena. Tena malalaka ny mpitsara eto Madagasikara ary tsy misy olona hafa mihitsy afaka hanana fahefana mihoatra azy”, hoy ny fanehoan-kevitry ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, nandritra ny Fotoam-bita farany teo.
Tahaka ny filam-boatsiary ihany, hoy ny Filoha, ny filazana amin’ny vahoaka malagasy fa mbola misy olona hafa ankoatra ny Mpitsara afaka mitsabaka amin’ny asany. “Na ny fitsirihana ny kolikoly ataon’ny Mpitsara, na ny fitsirihana ny ady atao amin’ny fanadiovana vola maloto, na ny fanenjehana ny mpanao trafikana andramena, dia malalaka tanteraka ny mpitsara mandray an’ireny asany ireny ary manao ny asany amin’ny fihainoana ny feon’ny fieritreretany”, hoy ny Filoha.
Fanontaniana tsy tokony hipetraka mihitsy ny hoe fangatahana antoka amin’ny Filoha mba hampisy ny fahaleovantenan’ny Fitsarana. Efa mahaleotena ary malalaka ny Fitsarana. “Manaiky ny fahefan’ny Fitsarana ny Filoha, izay no anton’ny fanginako, mampangiana ahy amin’ny raharaham-pitsarana iray na vitsivitsy angatahana ny hevitro.
Tsy misy tokony hanontaniana ahy satria malalaka ny mpitsara amin’ny fandinihana ny raharaha eo am-pelatanany”, araka ny hevitry ny Filoha.
Voavaly mazava tsara izany ny mikasika ny raharaha Claudine Razaimamonjy. Nisy tokoa mantsy ny nanao adihevitra diso lalana ka nivoy fa ilaina ny hevitry ny Filoha. Efa io mazava be io ny hevitry ny Filoha, fa tsy misy tokony hiandrasana ny heviny satria tsy izy no Mpitsara.
Fa teboka iray lehibe noresahin’ny Filoha ihany koa ny fanazavany ny andininy faha 111 –n’ny Lalàmpanorenana, izay milaza fa ny mpitsara rehetra am-perinasa dia tsy mahazo maka fandaniana politika. Aoka tsy hafangaro ny politika sy ny asam-pitsarana.
Nangonin’ i Tojo Ramilianta
Tafiditra indrindra amin’ny tetikasa fampandrosoana ara-toekarena eto Madagasikara ny tetikasa fanitarana ny seranan-tsambon’i Toamasina. Araka ny efa fantatra, tetikasa goavana hiarahan’ny Fanjakana malagasy sy ny Fanjakana japoney izany. Raha ny fanazavana, mitentina hatrany amin’ny 639 ...Tohiny